Toeram-pisakafoanana an-tserasera soedoà - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(276 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Loading ... Hatramin'ny volana janoary 2018 dia ara-dalàna any Suède ny karazana filokana rehetra. Ny ampihimamba amin'ity sehatra ity dia an'ny Svenska Spel an'ny fanjakana, natsangana tamin'ny 1997 tamin'ny alàlan'ny fampitambarana orinasa roa: Penninglotteriet sy Tipstjänst. Svenska Spel dia miasa ao amin'ny firenena ny filokana monina an-tanety, ary koa ny sehatry ny loteria. Araka ny lalàna momba ny filokana any Soeda ao amin'ny casino dia afaka milalao lalao toy ny roleta, ny craps ary ny lalao karatra ianao, ny milina filokana, ny poker. Ny zo manokana hanolotra ireo lalao rehetra an'ny Svenska Spel ireo. Ho an'ny ara-dalàna, ny fiarovana ary ny fahatokisana ny tsena filokana soedoà dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana filokana any Suède.
Hatreto dia tsy voafehy ny filokana amin'ny Internet any Suède. Ny fanjakana monja amin'ny fanjakana Svenska Spel dia manan-jo hanolotra poker amin'ny Internet sy bingo amin'ny Internet. Na izany aza, nanambara ny fanovana mety amin'ny lalàna misy momba ny filokana an-tserasera any Suède ireo manam-pahaizana momba ny filokana, izay mamela ny hampiditra rafitra fahazoan-dàlana amin'ny endrika filokana hafa amin'ny Internet.
Lisitry ny Top Sites 10 Swedish Online Casino
Lalao any Soeda
Ny diantsika anio dia firenena manankarena tantara, fampiononana ary filaminana - any Suède. CasinoToplists dia manolotra ny fahitana ireo zavatra hita maso, ireo mampiavaka azy ary ireo fomban'ity firenena mahafinaritra ity. Ary, mazava ho azy, mianatra zavatra betsaka momba ny filokana sy filokana.
Suède - ny toerana misy ary tantara maro;
Azo atao ny mahazo casinos avy amin'ny tany;
izay niorina an-tanàn-dehibe toy ny Sundsvall), Malmö, Gothenburg ary Stockholm, renivohitry ny firenena;
Taona 20 + akanjo fitafy.
Trano dimy ao Stockholm ao Sweden miaraka amin'ny adiresy renivohitra;
Zavatra mahaliana momba an'i Soeda sy ny mponina ao aminy.
Ny toerana misy an'i Soeda sy tantara kely
Soeda dia any Eropa Avaratra any amin'ny faritra atsinanana sy atsimon'i Scandinavia. Any andrefany dia mifanakaiky amin'i Norvezy izany, ary ny avaratra-atsinanana - miaraka amin'i Failandy. Avy any Danemarka hanasaraka ny Straits Öresund, Kattegat ary Skagerrak.
Ny firoboroboan'ny firenena dia nahatratra tamin'ny taonjato faha-17, saingy tsy afaka nitana ny toerany voalohany noho ny ady tany avaratra niaraka tamin'i Russia. Tamin'ny taona 1809, very ny faritra atsinanana sasany any Suède, ary very ny fiantraikany tany Failandy mpifanila vodirindrina aminy. Suède dia teo anilan'ny Alemana hatrany ary nandritra ny tantara dia nanampy imbetsaka ny governemanta, anisan'izany ny fotoanan'ny Ady Lehibe Faharoa.
Casino sy filokana ao Soeda
Ny Suède dia olona azo ampiharina ary manandrana mahazo ny tombony rehetra aho, na fanodinana fako na fidiram-bola amin'ny filokana. Ao amin'ny firenena dia afaka milalao amin'ny fahafinaretana ianao, saingy eo ambany fifehezana henjana ataon'ny fanjakana. Ka tamin'ny taona 1999 dia trano 4 no naorina tao amin'ireo tanàna lehibe indrindra eto amin'ny firenena: Sundsvall (niorina tamin'ny trano fanorenana) , Malmö , Göteborg ary ao an-drenivohitra, Stockholm. Ity no casino lehibe indrindra eto amin'ny firenena «Casino Cosmopol Stockholm». Nisokatra vao tsy ela akory izay - tamin'ny martsa 2003 ary hitanao izany amin'ny adiresy Kungsgatan 65. Eto ianao dia afaka milalao amin'ny Roulette, ary koa amin'ny Blackjack, Caribbean Stud ary Baccarat. Atao tsindraindray ny fifaninanana poker casino. Ao amin'ny poker dia afaka milalao an-telefaona an-tariby izay efa voarakitra an-telefaona ianao, ary miditra amin'ny andron'ny lalao. Ny mpitsidika dia andrasana isan'andro manomboka amin'ny 13.00 ka hatramin'ny 5.00 maraina.
Ny casino dia manana fetrany manokana: tsy maintsy 20 na mihoatra ianao (hanamarina ny pasipaoronao eo am-baravarana) ary ny fanamiana dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny foto-kevitra «smart-casual» (smart casual). Azafady, mariho fa ny euro matetika dia tsy ampiasaina any Suède, ao no mampandeha ny volany manokana - krona soedoà.
- Vasa Museum . Adiresin'ny tranom-bakoka: Galärvarvsvägen, 14. Tranombakoka tsy mahazatra io, ary ilay sambo notehirizina hatramin'ny taonjato faha-17. Etsy an-danin'izany, izy irery no eto amin'izao tontolo izao. 95% amin'ireo endrika sy sary sokitra voasokitra rehetra dia voatahiry amin'ny endriny voalohany. Ao anaty tranombakoka namboarina izao ny sambo, ahafahanao mijery horonantsary momba ilay fampirantiana (amin'ny fiteny 16).
- Alfred Nobel Museum . Adiresy: Börshuset, Stortorget, gamla stan. Eto, ny sarin'ireo mpandresy nahazo loka 800 dia tsy hoe handravaka ny rindrina fotsiny, ary handeha amin'ny karazana mekanisma amin'ny fanadiovana maina. Ity dia famolavolana tena mahaliana fa tsy manampy amin'ny fitehirizana toerana ao amin'ny tranombakoka ihany. Saingy tsaroany indray fa natokana ho an'ny fanatanterahana siansa ny tranombakoka. Misy ihany koa ny fampitaovana ifandraisana izay ahafahan'ny olon-dehibe manan-janaka mamerina mamerina ny sasany amin'ireo zavatra hitany miavaka.
- Tranombakoka "Skansen". Adiresy: Djurgardsslatten 49-51. Mitsidika an'i Suède mandritra ny adiny roa amin'ny rivotra madio? Mora foana! Ary izany rehetra izany dia misaotra ny tranombakoky ny kolontsaina soedoà "Skansen". Ity ny trano sy ny fananana taonjato 18-19. Eo amin'ny faritry ny tranombakoka dia be atao amin'ny asany isan'andro ny mpanao asa tanana, ary azonao atao ny mijery ny fomba fanaovan'ireo mpanao kiraro, mpanao mofo ary mpitsoka fitaratra.
- Tranombakoka "Junibacken". Toerana: ny nosy Djurgarden any Stockholm. Izy io dia tranombakoka misy ny tantaran'i Astrid Lindgren malaza ary paradisa ho an'ny ankizy sy ireo mpankafy ny asany rehetra.
Zavatra mahaliana momba an'i Soeda sy ny Swedes
Any Soeda dia mihoatra ny 300,000 ny olona manana ny anarana Carlson / Karlsson;
Mpianatra AVERAGE AGE amin'ity firenena ity - 26 taona;
Haba be dia be izany - 22% amin'ny tombom-barotra;
Any Suède dia misy ny “Ice Hotel» - «ICEHOTEL». 200 km avaratry ny Circle Arctic ao amin'ny tanànan'i Jukkasjarvi no tena "ice hut". Nanorina isan-taona izy, satria ny loharano tokana avy amin'ny riaka sisa tavela. Eto ianao dia afaka manana sary sokitra vita amin'ny ranomandry, mandeha manjono amin'ny ranomandry, ary ho vavolom-belona amin'ny aurora borealis;
"Snus" - paraky paraky sy simika. Ny soedoa dia apetraka ao ambanin'ny molotra ambony ary ampiasaina ho solon'ny sigara mahazatra;
Ny sakafo tena tianao indrindra dia ny pizza kebab (hena, fromazy, koba ary saosy manokana ho an'ny kebab). Matetika, tokantrano iray fa tsy misakafo hariva dia tia mitsidika ireo kafe eo akaiky eo na rojom-pisakafoanana haingana;
Centenarians soedoà - 80 taona mahery ny androm-piainana eto (iray amin'ireo mari-pahaizana tsara indrindra eran'i Eropa);
Mihevitra ny harem-pireneny sy mandany angovo am-pahendrena ny Soedoà. Ohatra, ao an-tanànan'ny Borås herinaratra avy amin'ny crematorium no ampiasaina amin'ny fanafanana ny tanàna (trano 60,000, 10% amin'ny angovo ilaina). Ny milina fanasan-damba dia tsy misy mihitsy - eto dia ampiasaina amin'ny efitrano fanasan-damba iraisana.
0.1 Endriky ny matoanteny amin'ny teny silaovena
0.2 Lisitry ny Top Sites 10 Swedish Online Casino
3 Lalao any Soeda
3.0.1 Ny toerana misy an'i Soeda sy tantara kely
3.1 Casino sy filokana ao Soeda
3.1.2 Zavatra mahaliana momba an'i Soeda sy ny Swedes
3.1.3 Any Soeda